Badinga uxhaso abayomela elakuleli | Ilanga News
Home Izindaba Badinga uxhaso abayomela elakuleli
Badinga uxhaso abayomela elakuleli
Bangaphansi kohlelo lwenhlangano engenzi nzuzo
UKUSHODA ngomSama-riya onesihawu kunga-se kufiphaze iphupho lezingane eziwu-6 za-seGreytown eziqokwe ukuyomela iNingizimu Afrika emncintiswaneni womkhalambazo (karate) eTokyo, eJapan ngoMbasa (April) ngonyaka ozayo.
U-Owami Luvuno (12), uNtando-yenkosi Skwreqe (12), u-Andiswa Dlamini (13), u-Andile Dlamini (13), uPhiwokuhle Ngubane (18) noLonathemba Mashazi (8) – osebuya komunye omncintiswano obuseTokyo kulo nyaka – babheke-ne nenkinga yokuqongelela
uR250 000 ukuze bakwazi ukubhekana nezindleko zohambo lwabo lwalo mdlalo othathwa njengowa-ntu abazihloniphayo.
Kulezi zindleko badinga imali yokuthenga amathikithi endiza, eyokudla neyokukhokhela indawo yokulala nokuthenga izinsiza nje-ngoba iningi labo liqhamuka emi-ndenini ehlwempu, engeke ikwazi ukukhipha le mali.
Lezi zingane zingaphansi kohlelo lokulekelela intsha ngamakhono oluqhutshwa yinhlangano enge-nzi nzuzo, i-Umvoti Aids Centre. Le ndawo yaqala isiza abantu aba-nengculazi kanti manje kayisenzi lokho kuphela, isisiza nentsha ya-sendaweni iningi layo eqhamuka emakhaya ahlwempu ukuzama ukuyiqoqa ekubeni wuvanzi.
La masosha ezwe aqokwa
ukuba aye kulo mncintiswano nje, aqale ngokungenela owesifunda obungoNdasa (March) eDumbe, anqoba adlulela kobuseGreytown ngoNhlaba (May), adlulela
kokazwelonke obusePort Elizabe-th ngoNtulikazi (July), okuyilapho eqokwe khona ukuyomela elakuleli eTokyo.
UMnu Lungisani Mabaso
ongumqeqeshi walezi zingane – ngaphansi kwe-Umvoti Aids Centre – uthi konke lokhu kuyimi-sebenzi nokuzimisela kwalezi
zingane. Uveze ukuthi inkinga asebebhekene nayo manje ngeyoku-thola lo R250 000.
“Okwenze saqala le ndawo
yokujima wukuthi bengibona itha-lente lalezi zingane ebengijwayele ukuziqeqesha. Ngicele abaseMvoti Aids Centre ukuba sihlangane si-sebenzisane ngaphansi kohlelo lwabo lokulekelela izingane ezivela emakhaya adonsa kanzima.
“Siqale amakilasi omkhalambazo kanti iningi lazo izingane ziqhamuka eTin Town – okuyindawo eyi-mijodolo, – yisehostela lalapha eGreyton naseNhlalakahle okuyi-lokishi lakhona lapha endaweni.
“Okubuhlungu wukuthi kazi- kwazi ukukhokhela la makilasi, yi-ngakho sabona kunesidingo sokuba siwavule lapha esikhungweni. Izindleko zohambo sezizonke wu-R349 000, kodwa-ke thina usizo esilucelayo ngoluka-R250 000 ku-phela ukuze sizogcwalisela kulo-khu okuncane siqhubeke nokufeza iphupho lezingane.
“Besicela noma ngabe ngubani ongasilekelela ngokuthola le mali ukuze izingane zizokwazi ukuqhu-beka nohambo,” kusho yena.
UNkz Phindile Mzila ongunina ka-Andiswa, uthe bajabule kakhulu ngempumelelo yendodakazi ya-khe, wathi uyafisa ukuba izingane ziluthole uxhaso.
“Into engiyithanda kakhulu abayifundayo ngomkhalambazo, yindlela yokuziphatha nenhloni-pho abafundiswa yona nokuzivikela. Sesike saba nemihlangano ci-she emibili nabaqeqeshi babo ku-zanywa izindlela zokuba kuthola-kale imali ezoxhasa lolu hambo lwabo.
“Siyethemba ukuthi kukhona osomabhizinisi abazolekelela ukuze izingane zifeze amaphupho azo,” kusho yena.
Previous articleWINA ISELULA NE AIRTIME KA R150
Next articleUhleko lwakhe selumenze isilomo